arc အရှည် & entity ကိုတိုင်းတာနှင့်အခြားသူများအားရလဒ်များကိုမျှဝေဖို့ဘယ်လို? »အခမဲ့ DWG Viewer အွန်လိုင်း | GstarCAD ကြည့်ရှုသူ | DWG FastView
နေအိမ် »ပံ့ပိုးမှု»arc အရှည် & entity ကိုတိုင်းတာနှင့်အခြားသူများအားရလဒ်များကိုမျှဝေဖို့ဘယ်လို?
arc အရှည် & entity ကိုတိုင်းတာနှင့်အခြားသူများအားရလဒ်များကိုမျှဝေဖို့ဘယ်လို?
DWG FastView သည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုင်းတာကိရိယာများတွင်ပေးသည်
မိုဘိုင်းပေါ်တွင် CAD ရုပ်ပုံများကိုသင်ကြည့်သောအခါအကွာအဝေး၊ areaရိယာ၊ ထောင့်စသဖြင့်တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။ ဒီနေ့မှာ arc ရဲ့ length, entity ကိုတိုင်းတာပြီးတိုင်းတာမှုရလဒ်တွေကိုသင်၏အဖွဲ့ ၀ င်တွေကိုဘယ်လိုဝေမျှရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
arc length အရှည်ကိုအရင်တိုင်းပါ။ ပုံဆွဲလျှင်ဖွင့်သည့်အခါအောက်ခြေရှိ ruler icon ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Arc length ကိုနှိပ်ပါ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် start point၊ end point နှင့် arc ပေါ်ရှိ point တစ်ခုသတ်မှတ်ပါ။ တတိယအချက်မှာ၊ အကယ်၍ arc radius၊ စုစုပေါင်းထောင့်၊ arc length နှင့် chord length ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ တန်ဖိုးအကွက်ကိုရှည်စွာ နှိပ်၍ သင်ကူးယူနိုင်သည်။ command ကိုအဆုံးသတ်ရန် X ကိုနှိပ်ပါ။ (ဤပုံကိုမတွေ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကိုးကားပါ ဒီ link ကို)
Measure entity: ဤ command သည်ရွေးချယ်ထားသောအရာဝတ္ထုများ၏ attribute အချို့ကိုပြနိုင်သည်။ ဥပမာလိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မျဉ်း၏အရှည်နှင့်ထောင့်ကိုဖော်ပြသည်။ (ဤပုံကိုသင်မမြင်နိုင်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။ ဒီ link ကို)
ရလဒ်များကိုဝေမျှပါ - ဤအင်္ဂါရပ်သည်ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန်အစဉ်ပြသည်။ အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ share ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသင်၏အဖွဲ့ ၀ င်များအားဝေမျှနိုင်သည့်ဖိုင်အမည်ကိုသင်အမည်ပြောင်းနိုင်သည်။ (ဤပုံကိုမတွေ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။ ဒီ link ကို)
ယခုငါသင်အထက်ပါပေးဆောင် features တွေအကြောင်းကိုအလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်း။ ဒီတော့ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ ရုံ သင့်အကောင့်ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ ယခုသို့မဟုတ်အောက်ကအဆင့်မြှင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
15“ How to measure arc length & entity and share the results to others?” သို့တုန့်ပြန်သည်
kailasarao k က
4:14 ညနေ မှာ ဇူလိုင် 7, 2020
8:27 ညနေ မှာ ဇူလိုင် 14, 2020
Proje ve taslaklar üzerin de nasэlölçüm yapabilirim
11:40 ညနေ မှာ ဇူလိုင် 22, 2020
Hoang Thương က
9:14 မနက် မှာ ဩဂုတ် 23, 2020
ဤအရာသည် .ng dụngbịlổihoàivậyဖြစ်သည်။
10:34 မနက် မှာ စက်တင်ဘာ 7, 2020
cạpcểthể cung cấpmốtsố chi tiếtvà cung cấp cho chúngtôimộtảnhchụpmà h ?nh?
5:38 မနက် မှာ ဩဂုတ် 27, 2020
这个 DWG 能够帮忙我们做工又快又又准
9:27 မနက် မှာ ဩဂုတ် 27, 2020
6:21 ညနေ မှာ စက်တင်ဘာ 30, 2020
9:44 မနက် မှာ အောက်တိုဘာ 12, 2020
ဒီနေရာမှာ Windows ကိုအသုံးပြုပြီး Windows ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာပါ။ Chong tôisẽ cung cấp cho bạnphầnthưởng။
Md Ahmad Raza က
3:55 ညနေ မှာ အောက်တိုဘာ 1, 2020
9:13 မနက် မှာ အောက်တိုဘာ 8, 2020
2:10 မနက် မှာ အောက်တိုဘာ 11, 2020
9:39 မနက် မှာ အောက်တိုဘာ 12, 2020
نعم، يوجدإصدار Windows ။
7:45 ညနေ မှာ နိုဝင်ဘာ 6, 2020
Keramettin Gençtürk က
1:14 ညနေ မှာ ဧပြီ 23, 2021
လေး × လေး =